INTERNETKA AYAA SI AAN CAADI AHAYN UGAMUHIIMSANAADAY "TV"ga
Aaladda Internetka ayaa marba marka kasiidanbaysa ka soo mid noqonaysa qayb ka mida nolol maalmeedka ruuxa aadamaha ah,isagoo ruuxu wakhtigiisa marka sadexmeeloodloo qaybiyo laba qaybood ku dhowaad maalintii ku luminaaya wakhtigiisa internetka meesha uu waayadii hore ka daawanjiray TVga,iyadoo ay aad iyo silama filaana hoos ugu dhacday isticmaalidii ruuxu u haliilijiray TVga,sidaas waxaa xaqiijiyay baaritaan jaamacadeed.
61% ayaa u arka aalada Internetka in uu aad iyo in aan lasookoobikarin uga muhiimsanyahay aaladaha kale ee laga helo xogta kolka laga hadlaayo helidda akhbaaraha ruuxu u baahanyahay,waxaa xaqiijintaas samaysay Jaamacadda California ee los angels(University of California at los Angels"UCLA").
Baaritaanka lasameeyay ayaa cabiraad uu sameeyay ku tilmaamay in ruuxu isku cel-celis11saacadood todobaadkii ku jiro khadka shabakadda NETka meesha uu TVga kadaawado 4.5 saacadood todobaadkii.
kooxaha NETka isticmaala ayaa waxaa ay u arkaan in joornaalada iyo raadiyuhu ay meeshaba kasiibaxayaan.
73% ayaa u arka Netku in uu ka muhiimsanyahay dhamaan aaladaha wararka laga helo ama laysku maaweeliyo,meesha ay 67% qabaan in buugaagta laysku maawelinteedu fiicantahay ,57%ayaa waxaa ay qabaan joornaalada.
"wuu kuu furanyahay 24 ka saacadood.waad ka eegankartaa kana ogaan kartaa wax alaaliyo wixii aad uga baahantahay ee war bixin caalam iyo gudaba,ayay tiri Julie Von Haase oo 31jir ah oo hawlwadeen sare ka ah San Fracisco."
Television ka waxaad ka dhowran kartaa oo kaliya waxa ay markaas sheegayaan oo aan sii raaridnayn"ayay raacisay.
warbixinta ayaa cadaysay in ay aad u siikordhayso sanadwalba akhriska iyo xiisaynta Internetka.
WAR aan Farxad u lahayn Ganacsiga NET ka.
daraasadan ayaa aad uga dayrisay in dadka wax ku iibsanaya qaabka internetku ay aad hoos ugu sii dhacayso,waxaa uu waliba hoos udhacaasi saamayn wayn ku yeeshay qaabka wax ku iibsiga"galalka amaahda"(Credit Cards) ee Webka.
badiba dadka doonaya in ay Credit Cardkooda wax ku iibsadaan ayaa walaac ka muujiyay kalsoonidarada amaanka kaarkooda,oo ay yiraahdeen ma jirto cid damaanad qaadi kartaa in aysan khatari kaga imankarin xaga lacagaha ah.